शिव र भुवनको एउटै बोली– ‘हामी वीर र विक्रम’ - Everest Dainik - News from Nepal
शिव र भुवनको एउटै बोली– ‘हामी वीर र विक्रम’
काठमाडौं, जेठ ३ । एक समय नेपाली चलचित्रमा एकछत्र राज गरेका अभिनेता हुन्– शिव श्रेष्ठ र भुवन केसी । दुईलाई एक जमना एकअर्काका प्रतिस्पर्धी पनि भन्ने गरिन्थ्यो ।
यद्यपि, दुईले काम गर्ने चलचित्रको जनरा भने फरक थियो । भुवन बढी लभस्टोरी फिल्म गर्न रुचाउँथे भने शिवले आफूलाई एक्सन हिरोको रुपमा स्थापित गरेका थिए । दुईलाई कुनै समय नेपाली फिल्मको धरोहर मानिन्थ्यो । दुई दशकअगाडि एकसाथ ४ वटा फिल्मको छायांकनमा समेत व्यस्त हुने शिव र भुवन केही वर्षयता भने पूरै सुस्ताएका छन् । दुईलाई दर्शकले ठूलो पर्दामा हेर्न नपाएको वर्षौ भइसकेको छ । शिव पछिल्लो पटक चलचित्र ‘बागमती’ मा देखिएका थिए । तर, यो फिल्म बक्सअफिसमा नराम्रोसँग डुबेको थियो । यसपछि उनले कुनै फिल्ममा काम गरेका छैनन ।
याे पनि पढ्नुस शुक्रबारदेखि चलचित्र 'रोज' प्रदर्शनमा, बिहानैदेखि ९५ वटा हलहरुमा हाउसफुल
‘ब्ल्याक डायरी’ भुवन अभिनीत पछिल्लो रिलिज फिल्म हो भने गत फागुनमा रिलिज भएको फिल्म ‘क्याप्टेन’को ‘कर्ली कर्ली कपाल’ बोलको गीतमा उनले ठुम्का लगाएका थिए । केही वर्षयता उनी अभिनयबाट दूरी बनाएर छोरा अनमोल केसीको करिअर बनाउन दिलोज्यान दिएर लागेका छन् । साथै, फिल्म निर्माण र निर्देशनमा पनि उनी सक्रिय छन् । शिव पनि अहिले अभिनयबाट दूरी बनाएर फिल्म निर्माणतिर लम्किएका छन् । उनले निर्माण गरेको फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ को आधा छायांकन पूरा नहुँदै थन्किएको छ । अब बन्छ–बन्दैन ? अन्योलमा छ । यो फिल्मबाट उनले आफ्नो छोरा शक्ति श्रेष्ठलाई डेब्यू गराएका छन् । अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरकी छोरी कविताले पनि यही फिल्मबाट डेब्यू गर्दैछिन् ।
याे पनि पढ्नुस आगामी साउन २५ देखि चलचित्र ‘टिनएज’ प्रदर्शन हुने
करिअरको उत्कर्षमा रहँदा एकअर्कासँग खासै भेटघाट र राम्रोसँग नबोल्ने भुवन र शिवको केही वर्षयता भने लोभलाग्दोे सम्बन्ध छ । दुबै एकअर्काको तारिफ गरेर थाक्दैनन् । थुप्रै फिल्म साथमा पनि गरेका शिव र भुवन आफूहरुको सम्बन्ध दाई र भाईको रहेको बताउँछन् । बुधवार चलचित्र ‘बीर विक्रम २’ हेर्न पुगेका उनीहरुले आफूहरु पनि बीर र विक्रम रहेको बताए।
याे पनि पढ्नुस ‘नेप्टे’ मा दयाहाङ नायकबाट बने खलनायक
चलचित्र हेरिरहँदा आफ्नो साथीलाई कति सम्झनुभयो ? भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा भुवनले शिवलाई अंकमाल गर्दै भने– ‘शिव श्रेष्ठ नै मेरो बेस्ट फ्रेण्ड हो । ‘बीर विक्रम २’ साथीको कथा हो । शिव र मैले खेलेका धेरै फिल्ममा पनि त्यस्तै कथा थियो । यो फिल्म हेर्दा शिव र मैले विताएका पुराना दिनहरु ताजा भयो ।’ दुवैले फिल्म राम्रो बनेको बताउँदै दर्शकलाई हेर्न आग्रह गरे ।